လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်
Posted by Zaw Wonna on Sep 28, 2012 in Myanma News, News | 19 comments
ရန်ကုန်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ မေတ္တာညွန့် ဘူတာရုံ အနီးက စက်မှု (၁) လမ်းထိပ်တွင် အမြဲ ဂိတ်ထိုးလေ့ရှိသော ဆိုက်ကားသမား တစ်ယောက်ရှိသည်။ တစ်ကိုယ်ရေ တစ်ကာယသမားဖြစ်ပြီး သူ့နာမည်ကို ရပ်ကွက်က လွယ်အိတ်ဟု ခေါ်ကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် (18.9.2012) နေ့က နံနက် ဆယ်နာရီခွဲခန့်တွင် တာမွေရဲစခန်းမှ ရဲဝန်ထမ်း သုံးဦး ၄င်းထံ ရောက်ရှိလာကာ “မင်းလားကွ လွယ်အိတ်ဆိုတာ” ဟု မေးမြန်းပြီးနောက် နံပါတ်တုတ်ဖြင့် ရိုက်နှက်ကာ ဖမ်းဆီးသွားကြသည်။ ထိုနေ့ ညနေပိုင်းတွင် လွယ်အိတ်သည် မျက်နှာညိုမဲ ဖူးယောင်ဒါဏ်ရာ၊ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ ညိုမဲ ဒါဏ်ရာများဖြင့် ရပ်ကွက်သို့ ပြန်ရောက်လာသည်။ ၄င်း၏ အဆိုအရ ရဲစခန်းမှ သင်္ကန်းကျွန်း၊ စံပြဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဆေးရုံမှ ရပ်ကွက်သို့ လမ်းလျှောက်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၄င်း၏ သူငယ်ချင်းများ ပြောပြချက်အရ မျက်နှာမှ ဒါဏ်ရာများမှာ လွန်စွာ ဆိုးရွားသဖြင့် အစာပင် မစားနိုင်ကြောင်း၊ ပါးစပ်အတွင်းမှ သွေးများ အန်ထွက်ကြောင်း သိရသည်။ နောက်နေ့ (19.9.2012) နံနက်တွင် စက်မှု (၁) လမ်းထိပ်၊ လမ်းဘေး၌ သေဆုံးနေသော လွယ်အိတ်၏ အလောင်းကို ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူများ တွေ့ရသည်။ မကြာမီ ရဲဝန်ထမ်းများ ရောက်ရှိလာပြီး လိုက်ထရပ်ကားပေါ်သို့ အလောင်းကို ပစ်တင်ကာ သယ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါကိစ္စအတွက် မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူများမှ လွန်စွာ မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြပြီး တရားဥပဒေအရ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး အရေးယူပေးရန် လိုလားနေကြပါသည်။
ဒီလိုကစ္စဆန်ဆန်ပဲ http://www.hotnewsweekly.com/archives/11274 မှာဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့် (18.9.2012) နေ့က ဆိုတော့ hotnewsweekly ကဖေါ်ပြပြီးပြီလားမသိဘူး။
မဖေါ်ပြသေးရင် အမှန်တရားဖက်က မနစ်နာအောင် hotnewsweekly ကို သတင်းပေးလိုက်ပါလား။
hotnewsweekly ကသတင်းလေးကို တိုက်ရိုက်ဖတ်လို့ ရအောင် ကူးပေးလိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဗဟိုလမ်းနဲ့ သီရိမင်္ဂလာလမ်းထောင့် အနှေးယာဉ်ဂိတ်အမှတ်( ၉) ၌ ၂၆.၉.၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် စမ်းချောင်းမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ တပ်ကြပ်လင်းသူရ ၊ဒုရဲအုပ်တစ်ဦးအပါဝင် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးသည် တာဝန်ချိန် အတွင်း အရက်သေစာသောက်စားမူးရစ်ကာ ဆိုက်ကားသမားတစ်ဦးအား မတရားမင်းမဲ့ စရိုက်ဆန်ဆန် ရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်း ကာယံကံရှင် နှင့် သက်သေများက ဆိုကြသည်။
အဆိုပါကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်၍ ကာယကံရှင် ဦးဇော်မျိုးနောင် (ခ)သီဟ (၁၄/ဟသတ(နိုင်)၂၉၆၆၄၁)အား မေးမြန်းကြည့်ရာ “ကျွန်တော် ဆိုက်ကားနှင်းလာတာ ၇ နှစ် ကျော်လာပါပြီး။
ဒီလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ ဂိတ်မှာ အမြဲတမ်း တလှည့်စီ နှင်း လာတာပါ။
ဒီအဖြစ်မျိုးနဲ့လဲ တခါမှ မကြုံဘူးပါဘူး။အဲဒီ ညက သူတို့ရောက်လာတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကလဲ အိပ်နေတယ်။ အားလုံးပေါင်း ကျွန်တော်တို့ ၁၀ စီးလောက်ရှိတယ်။
ခါတိုင်းက ကျွန်တော်တို့ မီးချောင်းအောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ နေကြပါတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ ဒီရက်ကျမှပဲ မီးချောင်း ကကျွမ်းနေတယ်။ ကျွမ်းလို့ ကျွန်တော်တို့ အကြောင်းကြားထားတယ်။
မနေ့က ၂၇ ရက်နေ့ လာတပ်သွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အိပ်တာ အလင်းအောက်မှာပဲ အိပ်တာပါ။
အမှောင်ထဲမှာ မအိပ်ပါဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ မေးပါတယ်။ မင်းတို့ဆီမှာ အကြီးဆုံးကဘယ်သူလဲ။
ဂိတ်မှူးက ဘယ်သူလဲ။ အဲဒီအချိန်မှ ကျွန်တော်ကို တယောက်ကလာနိူးတယ်။ အဲဒါက ကျွန်တော် ကပြောပြတယ်။
ဆရာ ဂိတ်မှူးတော့ မရှိဘူး။ ဒီဂိတ်မှာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကတော့ ကျွန်တော် လုပ်နေပါတယ်။
ကျွန်တော် ဘာများလုပ်ပေးရမလဲလို့ ကျွန်တော်မေးပါတယ်။
မင်းက ဂိတ်မှူးလုပ်ရအောင် မင်းကို ဘယ်သူက ခန့်ထားလဲ ၊
ဆရာရယ် ကျွန်တော်တို့ က ၁၄ ၊ ၁၅ ယောက် ဆိုက်ကားလေးတွေကို တယောက်နဲ့ တယောက် စည်းစည်းလုံးလုံးလေးဖြစ်အောင် ဖွဲ့ပြီးတော့ ဒီလူတွေကနေ ကျွန်တော်ကို ရွေးထားတာပါ။ ရပ်ကွက်ကနေကျွန်တော်ကိုရွေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။
ခရီးသည် ဆွဲတဲ့နေရာမှာ အဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော် ကိုခန့်ထားတာပါ။
အဲဒါဆို မင်း ဧည့်စာရင်း ရှိလား ၊ သန်းခေါင်စာရင်းရှိလား ။
ဆရာရယ် ဧည့်စာရင်းတို့ ၊ သန်းခေါင်စာရင်းတို့ဆိုတာ အိမ်မှာပဲရှိတာပါဆရာရယ်။
နင်းလိုင်စင်ရောရှိလား။ နင်းလိုင်စင်ကို ကျွန်တော် ထုတ်ပြတယ်။
လိုင်စင် နံပတ်က ကျွန်တော်ကိုမထင်ဘူးပြောလိုက် ကျွန်တော်က လိုင်စင်နံပတ်က ဒီမှာပါလို့ လက်ညိုးထိုပြပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်ကို နားရင်ဖျက်ရိုက်လိုက်တယ်။
မင်းက ဘာကောင်လဲ ။ နောက်တချက်ကျွန်တော့်ကို ဆက်ရိုက်တယ်။
နောက်တစ်ဦးက ကျွန်တော်ကို ခြေထောက်နဲ့ ကန်တယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေက တယောက်မှ မပြောဘူး။
ကျွန်တော်ကိုမေးလို့ ကျွန်တော်က ပြောပြတာကို ကျွန်တော်ကိုလူမိုက်လားဆိုပြီးတော့ ပါးရိုက်တယ်။
နောက်ထပ် ထပ်ပြီးတော့ မေးတယ်။ မင်းက ဘယ်ဇာတိကလဲကွ ၊ တောင်ဒဂုံဇာတိပါဆရာလို့ပြောလိုက်တယ်။ မင်းတောင်ဒဂုံလား ဆိုပြီးတော့ ထပ်ပြီးရိုက်တယ်။ ကျွန်တော် ဘ၀မှာ ဒီလိုတခါမှ အရိုက်မခံရဘူးဘူး။
ကျွန်တော် ၀မ်းလည်းနဲမိပါတယ် ´´ဟုငိုယိုကာပြောပြသည်။
နိုင်ငံတော်မှ ပေးအပ်ထားသော အာဏာအား အလွှဲသုံးစားပြုလုပ်၍ မင်းမဲ့စရိုက်ပုံစံရိုက်နှက်ခဲ့သော
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှာ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးအား စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ထိရောက်စွာအရေးယူပေး ပါရန် ပြည်ထောင်စုရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်၊ နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်ထောင်စု ဒုဝန်ကြီး၊
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ရဲချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဌာနအသီးသီးအား အရေးယူးပေးပါရန်တိုင်ကြားထား ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ကြားရတာ စိတ်မကောင်းစရာပဲ … မြေနိမ့်ရာလှံစိုက်ကြပြန်ပြီ ။
ယူနီဖောင်းအားကိုးနဲ့ စိန်နားကပ်ရောင်နဲ့ ပါးပြောင်နေတဲ့ လူတွေ များသည်ထက် များလာလျှင် ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ ထပ်ဖြစ်လာဦးမှာပါပဲ …. :eee:
အပြစ်ကျိန်းသေလုပ်ထားသည့်တိုင်အောင် ၊ လူသိရှင်ကြား တရားခွင်မှာ ကြားနာစစ်ဆေးမှုမပြုပဲ ၊ ပြစ်ဒဏ်ပေးလို့မရပါဘူး ။ တရားခံဖမ်းလို့ သူက ပြန်ခုခံတဲ့ အခြေနေမျိုးဆိုလျှင်တော့ တမျိုးပေါ့ ။
အခုအခြေနေက သတ်သတ်ကို အနိုင်ကျင့်တာ ၊ ဘာမှ မမေးမြန်း မစစ်ဆေးပဲ ၊ နိုင်စားတာမျိုး ။
အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးက ကျန်ခဲ့တဲ့… စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ဆို …. ဟူးးးးးးးးးးးးးးးး
လူတစ်ယောက်ကို သေစေလောက်အောင် ရိုက်နှက်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့အပေါ် … ဌာနဆိုင်ရာလူကြီးမင်းများ ဘယ်လို responsible လုပ်မလဲ သိချင်ပါသေးရဲ့ … ။
ကျွန်တော် ကအဲဒီရပ်ကွက်မှာ မွေးကတည်းက နေလာတာ အခု လက်ဝဲမင်းဒင်လမ်းမှာနေနေတယ် အဲဒီသတင်းကိုတော့ လုံးဝမကြားမိသေးဘူး ။ ညနေပြန်မှစက်မှု ၁ လမ်းသွားမေးကြည့်အုံးမယ်။
မင်းမဲ့တိုင်းပြည်လား ပြည်သူချစ်တဲ့ရဲ ဆိုတာ
Yes that is true news .
ယူအက်စ်မှာ.. ဒီမိုကရေးစီနိုင်ငံတွေမှာတော့.. ရဲတွေကို အပြုတ်ချနိုင်တာ.. မီဒီယာပဲ..
မှန်ရင်လည်း.. မှန်သလို ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်..။
ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကို သေနတ်နဲ့ပစ်ပြီးလူစုခွဲတာ နှစ်ယောက်သေတယ်တဲ့
သူများမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျမှ ရလာတဲ့ ပိုက်ဆံ နဲ့ ဘဝ ရပ်တည်ဖို့ မင်းစဉ်းစားလိုက်တာပဲ ! မင်းအားကျတယ်ဆိုတာ ဆိုင်ကယ်လေး တဝီဝီ နဲ့ စကားပြောစက် ခါးကြားထိုးပြီး ပိုက်ဆံ ရှာရတာကိုလား ! မူးလာရင် အဘက်ဘက် က နိမ့်ပါးနေတဲ့ သူတွေကို ပြသနာ ရှာပြီး ထိုးကြိတ် အနိုင်ကျင့်ဖို့လား ! လက်နက် အားကိုး အဖွဲ့ အစည်း အားကိုး အခွင့်အာဏာအားကိုးနဲ့ လူစွာကြီး ဖြစ်ချင်နေတာပေါ့လေ ! ငါ့အဖေ မင်းဦးလေး သာရှိရင် ခု ငါပြောတာတွေထက် မင်းကိုပိုပြောလိမ့်မယ် ။ မင်း သင်တန်း သွားတက်ပြီး ပြန်လာတဲ့ အချိန်က စလို့ ငါတို့ အိမ်ထဲ ခြေချခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်လောက်ဘူး ! ( တချိန် က ဂရုဏာ ဒေါသဖြစ်ပြီး ညီ ( ၂ ) ဝမ်းကွဲ တစ်ယောက် ကို ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ စကားလေး အမှတ်ရ သွားတယ် ) အခု အထက်မှာ တွေ.ရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ လူမဆန် အောက်တန်းကျတဲ့ ကလေကဝ ကလေကချေ တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ ! တရားမျှတပြီး သန့်ရှင်းတဲ့ ဥပဒေ ဘက်တော်သား များရဲ့ တပ်ဖွဲ့ ။ ပြည်သူတွေ ချစ်တဲ့ ကူညီပါရစေ ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့ အညီ ပြည်သူလူထုကို အကျိုးပြုနေတဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း တရပ် အဖြစ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံသစ်မှာ မြင်ချင် တွေချင် မိသားစု လုံခြုံမှုတွေ အတွက် အားကိုး ချင်လိုက်တာဗျာ ! ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ဒီလိုပုံစံ တွေနဲ့ ဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံတော် လခစား ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ် ဆန်ကုန်မြေလေး အာဏာရှင် လက်ကိုင်တုတ် တွေပဲဖြစ်နေမယ် ။ခုကျူးလွန်သူတွေကို တရားဥပဒေ အတိုင်း ထိရောက်စွာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးကြပါ ခင်ဗျား !
လူတော်တော် များများ ဥပဒေ နဲ့ အညီ နေလာ ကြ စည်းကမ်းရှိလာ ကြတော့ ရဲ တွေ အမှု ရှာ ခက် ကုန်ပြီ နဲ့ တူ တယ်။
အကုန်ယူ အကုန်ယူ အကုန်ယူ ပါရစေခင်ဗျ အကုန်ယူ အကုန်ယူ အကုန်ယူ ပါရစေရှင့် (ရဲ ဆိုတာ ငိုစား ရယ်စား တရားဝင် ဒမြ ပဲ) ညီဝမ်းကွဲပါဆိုပြီး ခင်ရီ ဓါတ်ပုံကြီးချိတ် ပြီး စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ကေတီဗွီ မာဆတ်(မာဆွတ် လည်းဖြစ်တယ်) ဖွင့်ထားတဲ့ ကောင်တောင် ရှိ့သေး ဘာလိုင်းကြေး ဘာမှ့ကို ဝင်ရောက်စစ်ဆေး ဘာစီမံချက်လာလာ သူ့ဆိုင်ကတော့ အေးဆေးပဲဗျ
စစ်တပ်ကြောင့် တိုင်းပြည် ဒုက္ခရောက်ပြီးသွားပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ အကျင့်ပျက်၇ဲတွေကြောင့် ပြည်သူတွေ ထပ်ပြီး ဒုက္ခရောက်ကြရဦးမယ်။ လောလောဆယ်တော့ ရဲ ဆိုရင် တော်တော်လေး သိက္ခာ သမာဓိရှိပြီး အသိစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ အနည်းစု ရဲတွေကလွဲပြီး ရဲ မှန်ရင် မကောင်းသတင်း တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့ ကျော်ကြားနေပြီး ပြည်သူ့မေတ္တာ ဝေေ၀ဆာဆာကို ရနေကြပါကုန်၏။ ကျနော်အမြင်တော့ ရဲ ဆိုရင် …ပြည်သူ့ရဲ၊ ယာဉ်ထိန်းရဲ၊ အကောက်ခွန်ရဲ ..ရဲ..ရဲ..ရဲ…။ တွေ့ဖူးတဲ့ ရဲမှန်သမျှကတော့ ပြည်သူဆီက အနိုင်ကျင့်၍ ဖြစ်စေ၊ အကျပ်ကိုင်၍ ဖြစ်စေ၊ အခွင့်အရေးတစ်စုံတစ်ရာကြောင်ြ့ဖစ်စေ ကိုယ်စီကိုယ်စီ စားပေါက်တွေ ဝေဆာ စိုပြေ နေပါကြောင်း…။
အဲဒီဖြစ်ရပ်ကို သေချာလိုက်မေးကြည့်မှသိရတာ သူတို့တွေက အရက်အမူးလွန်ပြီးလမ်းဘေးမှာ အိပ်ရင်းနဲ့ သေသွားတယ် ဆိုပြီးသတင်းလွှင့်ထားတာ ရပ်ကွက်ထဲမှာ သူ့ကို လွယ်အိတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်တဲ့။
ရပ်ကွက်ထဲမှာ ရဲတွေတော်တော်လူပါးဝလာတာ အခုမှသိတယ် မိုးလင်းအလုပ်သွား မိုးချုပ်မှပြန်နေလို့။
နောက်ပြီးတော့ လဲ ဆိုင်ကယ်တွေလဲ တဝီဝီ နဲ့ ဘယ်သူက ဘာကောင်နဲ့ ဘယ်လိုပတ်သက်နေမှန်းကိုမသိဘူး။
မုန်းထှာ ရွံထှာ အမြင်ကတ်စရာကောင်းထှာ..
ပိုစ့် ပိုင်ရှင် က .. ဒီပိုစ့် ဟာ အမှန်ဖြစ်ကြောင်း တာဝန် ယူပါသလား ခင်ဗျ …။
အဲဒါလေး… သိချင်တယ်ဗျို့  ..။
ရန်ကုန်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ မေတ္တာညွန့် ဘူတာရုံ အနီးက စက်မှု (၁) လမ်းထိပ်
ဆိုတာ ကျုပ်နေတဲ့ အိမ် နဲ့ သိပ် မဝေး လို့ .. အဲ့ဒီ့ နားမှာ သွားမေးမြန်းပြီးပါကြောင်း …။
တာဝန်ယူပါတယ် ခင်ဗျ။ အခုဆို NLD တို့ ကြံ့ဖွံ့တို့ကိုလည်း အကြောင်းကြားထားပါပြီ။ ရပ်ကွက်ထဲက လူငယ်တွေလည်း အဲဒီကိစ္စအတွက် လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ အခြေအနေကတော့ အားရစရာပါ။
M လုလင် စုံစမ်းတော့ ဘယ်လို ကြားသိရပါသလဲ။
ရဲ အကြောင်းတော့ ပြောရရင် ကောင်းတာကိုပါမှာ မဟုတ်ဘူး
အရှက်မရှိ စခန်းရှေ့တပ်ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်မှာ ကူညီပါရစေတဲ့..
ပြည်သူတွေကို ကူညီပေးလိုက်တယ်လို့ မကြားမိဘူး
တနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ လယ်ယာအမှုတွေ လက်ပံတောင်းတောင်စီမံကိန်းလိုဟာမျိုးတွေမှာကြည့်လိုက်
သူတို့ ကာကွယ်ပေးနေတာ ပြည်သူ့ အခွင့်အရေးကို မဟုတ်ဘဲ အရင်းရှင် သူတို့ပထွေးတွေကိုလေ
နေပြည်တော်က ရဲတွေ ဘာလုပ်နေလဲမေးကြည့် အုံးမလား လမ်းဆုံတွေမှာ လူကြီးလမ်းကြောင်းပဲ လုံခြုံရေးပေးနေတာတွေ့နေရတယ်
ကျုပ်အသိထဲကကို ငွေဆယ်သိန်း အိမ်ထဲ ဝင်ခိုးခံရတာတစ်ယောက်၊ ဆိုင်ကယ်ပျောက်တာက တစ်ယောက်ရှိတယ်.. အမှုသာဆွေးသွားတယ် ဘာသတင်းမှ ပြန်မရဘူး..
ရေများရေနိုင် ၊ မီးများမီးနိုင် ခေတ်ဆိုးကြီးကနေ မလွတ်မြောက်သေးပါဘူးဗျို့ 